बसन्त चौधरीको ‘वसन्त’ माथि अन्तरक्रिया – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, ५ असार, उद्योगपति तथा साहित्यकार बसन्त चौधरीको कविता कृति ‘वसन्त’ माथि अन्तरक्रिया गरिएको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा मंगलबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकाबीच कृतिमाथि अन्तरक्रिया भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समालोचक डा. लक्ष्मण गौतम, साहित्यकार सावित्री कक्षपति र साहित्यकार कुमारी लामाले कृतिमाथि समालोचकीय टिप्पणी गरेका थिए ।
समालोचक डा.लक्ष्मणप्रसाद गौतमले कविताले वेदका सुक्तिमा झैं सटिकतामा व्यापकता बोक्नु पर्ने भएकोले कवि चौधरीका कवितामा आफूले त्यो पाएको बताए । कविताले व्याख्या मन नपराउने बताउँदै उनले गद्य कविता आख्यान नभएको स्पष्ट पारे । सरल भाषामा पनि गहिरो भाव प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण चौधरीको कविताले दिने पनि उनले उल्लेख गरे । गद्य कवितामा पनि लयको सिर्जना कठिन कार्य भए पनि चौधरीले त्यो पकडेको बताए । उनले भने, ‘गद्य कवितामा लय सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो । यो विषयमा कवि चौधरी कम दुर्घटित भएका छन् ।’
समालोचक गौतमले कवितामा व्यक्त प्रेमको अभिव्यक्ति सरल, स्वभाविक र अर्गानिक भएको पनि उल्लेख गरे । कविता प्रेममा मात्रै सीमित नभएर जीवन, दर्शन, देश र समयको सम्बोधन गर्न पनि सफल भएका बताए । उनले ‘वसन्त’ को पूर्वीय दर्शनमा विशेष महत्व रहेको उल्लेख गर्दै, वसन्त ऋतुमा ६० दिन हुनु, कृति भित्र ६० वटा कविता रहनु, कृतिको नाम आफ्नो नाम ‘बसन्त’ सँग मिल्नु, कवि चौधरी उमेरले ६० को दशकमा हुनुले निक्कै रोचक संयोग रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै साहित्यकार कक्षपतिले कवि चौधरीमा नेपाली भाषाको पकड राम्रो पाएको भन्दै प्रशंसा गरिन् । दर्शनको प्रवाह कवितामा भएको उल्लेख गर्दै कक्षपतिले प्रेमलाई उर्जामा परिणत गर्ने खुबी कविले बोकेको बताइन् । कविताका केही अंश प्रस्तुत गर्दै उनले प्राकृतिक वस्तुलाई मानवीयकरण गरेर प्रस्तुत गर्नु अझ रोचक रहेको बताइन् । विभिन्न ९ भाषामा प्रकाशित यो कविता संग्रहले नेपाली साहित्यमा तरङ्ग पनि ल्याएको उनको भनाई थियो ।
साहित्यकार कुमारी लामाले कृतिमाथि समीक्षा गर्दै विभिन्न ९ भाषामा कृति प्रकाशित हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरिन् । उद्योगपति र गीतकारको रुपमा परिचित चौधरी कविताको क्षेत्रमा यसरी अब्बल रुपमा प्रस्तुत हुनेले नेपाली साहित्यलाई ठूलो योगदान पुग्ने उनको दाबी छ । कविताले प्रेमको माध्यमबाट जीवन दर्शन व्यक्त गर्ने बताउँदै लामाले सरल, कोमल अनुभूति प्रदान गर्ने बताइन् । कविताले समग्रमा प्रेम, समय काल र मानवियता बोकेको बताउँदै उनले कविताले हरेक कुरामा सकारात्मक सोच राख्नु पर्ने सन्देश दिएको पनि बताइन् ।
कवि स्रष्टा बसन्त चौधरीले नियम वा सिद्धान्तमा बाँधिएर आफूले सिर्जना गर्न नसक्ने बताउँदै जीवन भोगाइ र कल्पनामा यो कृति तयार भएको उल्लेख गरे । उनले व्यापारमा मस्तिस्क र साहित्य सिर्जनामा मुटुको प्रयोग गर्ने गरेको बताए । मुटु वा दिलबाट निस्किएको आवाज नै आफ्नो सिर्जना हुने र पाठकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको उनले सुनाए । समालोचकप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कवि चौधरीले भने, ‘आफूले सिर्जना गरेको कुरा त्यो आँखाबाट हेरेको रहेनछ जुन आज तपाईंहरुले देखाइदिनु भयो ।’
सहभागीबाट आएको आख्यान लेखनमा किन आउनु हुन्न ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै कवि चौधरीले आफूले अहिलेसम्म आख्यान लेख्न नसकेको तर आगामि दिनमा प्रयास गर्ने बताए । उनले आफूलाई नेपाली भाषामा भन्दा हिन्दी भाषामा शब्द खेलाउन सहज हुने बताउँदै कतिपय नेपाली भाषाका रचनाहरु अब्बल हुन नसकेको पनि स्वीकार गरे । एकै पटक ९ भाषामा प्रकाशित कृतिलाई थप अन्य भाषामा पनि प्रकाशित गर्दै जाने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए ।
करिब २ महिना अघि सार्वजनिक गरिएको यो कविता संग्रह नेपालीसहित अंग्रेजी, हिन्दी, भोजपुरी, मैथिली, बंगाली, तामाङ, नेवारी र मारवाडी भाषामा प्रकाशित छ । यो कृतिलाई साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: ५ असार २०७५, मंगलवार १७:५५ 2018-06-19 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged समालोचकीय टिप्पणी साहित्यकार बसन्त चौधरी
डा. देवकोटाको निधनबाट नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति
८ बैशाख २०७५, शनिबार १०:३८ 2018-04-21
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १७:५३ 2018-06-10
Tags: समालोचकीय टिप्पणी, साहित्यकार बसन्त चौधरी